HOT NEWS: madaxweynaha Hirshabelle oo xilka laga qaadi rabo#aqriso yaa lagu badalayaa(magaca+qabiilka) | Xaqiiqonews
HOT NEWS: madaxweynaha Hirshabelle oo xilka laga qaadi rabo#aqriso yaa lagu badalayaa(magaca+qabiilka)
Warar sii hoose ay ku heshay shabakadda baahisa wararka qarsoon ee xaqiiqonews ayaa sheegaya in uu Socdo Olale mooshin xil ka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweynaha hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble.
mooshinkani ayaa dhaqan galaya 6 bilood ka dib maadaama dastuurka Hirshabeelle uu qorayo in aan Mooshin laga keeni karin madaxweynaha Lixda Bilood ee ugu horreysa.
waxaana wararkani hoose tilmaamayaan in xil ka qaadista ka dib lagu wado in madaxweyne loo doorto Cali cabdulaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo ka soo jeeda beesha abgaal oo iminka ah madaxweyne ku xiggeenka maamulka Hirshabeelle.
dhanka kale waxaa lagu wadaa in maalmaha soo socdo cali Guudlaawo uu safar ku dagi doono magaalada balaweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
WIXII WARAR AH EE SOO KRODHA KALA SOCO XAQIIQONEWS NETWORK